Ny Vaovao Mahafaly, Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao any Switzerland (WKG)
MARK TEXT> MISY FAHAFAHANA
Fantatrao fa ny filazantsara dia midika hoe "vaovao mahafaly". Fa tena mahafinaritra anao ve izany?
Tahaka ny maro aminareo, nandritra ny ankamaroan'ny fiainako dia nampianarina ahy fa miaina amin'ny "andro farany" isika. Izany dia nanome ahy fomba fijery iray izay mijery zavatra avy amin'ny fomba fijery fa ny faran'ny tontolo araka ny fantatsika anio dia ho tonga ao anatin'ny "taona vitsy". Fa raha "nanao fihetsika mifanaraka amin'izany" aho dia ho voaaro amin'ny Fahoriana lehibe.
Soa ihany fa tsy ilay ifantohan'ny finoako kristiana na ilay fototry ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Fa rehefa nino zavatra elaela ianao dia sarotra ny manala azy tanteraka. Ity karazana fijerin'ny tontolo ity dia mety hampiankin-doha ary noho izany dia mirona hahita izay rehetra mitranga amin'ny alàlan'ny fitaratra noho ny fandikana manokana ny "hetsika farany". Reko fa ny olona miorina amin'ny faminaniana amin'ny andro farany dia nantsoina hoe "apocaholics".
Tsy handeha lavitra ny ankamaroantsika. Saingy ny fihetsika izay entin'ny fiainana araka ny fantatsika dia hiafara amin'ny fotoana fohy dia mety hitarika ny olona "hanoratra" ny fanaintainana sy ny mijaly manodidina azy ary hieritreritra hoe: "Inona ny afobe?" Dia mijery ny zava-drehetra izy ireo. manodidina azy ireo amin'ny fomba tsy misy dikany ary lasa mpijery sy mpitsara mahafinaritra kokoa noho ny mpandray anjara izay miasa amin'ny fanatsarana zavatra. Ny sasany "ireo mpaka fiankinan-doha faminaniana" mihitsy aza dia ny fandavany ny hanohana ny asa fanampiana fanampiana maha-olona satria inoany fa raha tsy izany dia mety hahemotra ny fotoana farany. Ny hafa dia manao tsinontsinona ny fahasalamany sy ny zanany ary tsy miraharaha ny fitantanany satria mino izy ireo fa tsy misy ny hoaviny drafitra.
Tsy io ny fomba hanaraka an'i Jesoa Kristy. Niantso antsika ho jiro eto an-tany Izy. Mampalahelo fa ny jiro sasany avy amin'ny "kristiana" dia toa ny lehibe indrindra amin'ny helikoptera polisy mandehandeha eny amin'ny manodidina mba hanara-maso ny asan-jiolahy. Tian’i Jesosy ho jiro isika raha ny hoe manampy antsika hanao an'ity tontolo ity ho toerana tsara kokoa ho an'ny olona manodidina antsika. Te-hanolotra fomba fijery hafa aho. Maninona moa raha mino ianao fa miaina ao anatin'ny "andro voalohany" fa tsy "andro farany"?
Jesosy tsy nanoro antsika mba hanambara ny loza sy ny haizina. Nomeny hafatra fanantenana izahay. Nasainy nilaza tamin'izao tontolo izao izahay fa manomboka manomboka ny fiainana fa tsy "mamono azy". Ny filazantsara dia momba azy, iza izy, inona ary nataony ary inona no azo atao noho izany. Rehefa tafahafa tamin'ny fasiny Jesosy dia niova ny zava-drehetra. Izy no nahary ny zava-drehetra. Tao aminy no nanonon'Andriamanitra sy namihany ny zava-drehetra any an-danitra sy ety an-tany (Kolosiana 1,16-17).
Ity scenario mahafinaritra ity dia fintina ao amin'ilay antsoina hoe andininy volamena ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona. Mampalahelo fa voalazan'ny an'ity andininy ity fa mihamalemy ny heriny. Fa jereo ity andininy ity. Afohy moramora ilay izy, ary avelao hilentika tanteraka ny zava-misy mahatalanjona hoe: "Ary Andriamanitra tia an'izao tontolo izao, dia nomeny ny lahitokana lahy, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay" Jn 3,16:XNUMX).
Ny filazantsara dia tsy hafatra fanamelohana sy faharatsiana. Nataon'i Jesosy mazava tsara izany ao amin'ny andininy manaraka: "Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa izao tontolo izao kosa hovonjeny" (Jao 3,17:XNUMX).
Tonga hamonjy an'izao tontolo izao Andriamanitra, fa tsy mba hanimba azy. Izany no antony tokony hisehoan'ny aina ny fanantenana sy ny fifaliana fa tsy ny fahantrana sy ny fahatahorana mialoha. Nomen'i Jesosy fahatakarana vaovao ny dikan'ny maha olona antsika isika. Raha tsy mifantoka tsara ao anatiny isika dia afaka miaina am-pirenentsika sy mahomby eto amin'ity tontolo ity. Raha manana fahafahana isika, tokony “hanao ny tsara rehetra, indrindra fa ny finoantsika” (Gal 6,10:XNUMX). Ny mijaly any Dafur, ny olana mipoitra avy amin'ny fiovan'ny toetr'andro, ny fifandrafiana mitohy any Moyen Orient ary ireo olana hafa rehetra izay manakaiky ny tranontsika dia ny fifandraisanay. Amin'ny maha-mpino antsika, dia tokony hifampiahy isika ary hanao izay azontsika atao hanampy - ary tsy mipetraka eo amin'ny sisin-dàlana ary maneso avy hatrany aminay: "Nilaza taminay izahay".
Rehefa natsangana tamin'ny maty Jesosy dia niova ny zava-drehetra - ho an'ny olona rehetra - na fantany izany na tsia. Ny asantsika dia ny hanao izay tratry ny heriny mba hahalalan'ny olona. Mandra-pahatongan'ny “tontolon'ny faharatsiana ankehitriny” dia hiatrika fanoherana isika ary indraindray fanenjehana aza. Nefa mbola eo am-piandohana izahay. Raha jerena ny mandrakizay izay hitranga, dia ireo maso roa ireo dia ny mason'ny Kristianisma roa arivo taona voalohany.
Mieritreritra aho fa tena antony mahomby indrindra sy ho tsara ary amin'ny raharahan-drainay. Mino aho fa hitanao toy izany ihany.